Ny fihetsiketsika dia tsy misy endrika fa ny endriny tsy afaka mihetsika tsy misy fihetsiketsehana. — T.
Vol. 1 MAY, 1905. Tsia
INDRINDRA no fanehoana fahatsiarovan-tena.
Ny tanjon'ny hetsika dia ny hampiakarana ny fahatsiarovan-tena.
Miteraka saina ny fihetsiketsika.
Raha tsy misy ny fihetsiketsehana dia tsy misy fiovana.
Ny fihetsiketsika dia tsy hitan'ny fahatsapana ara-batana fotsiny.
Ny fihetsiketsehana dia ny lalàna mifehy ny hetsiky ny vatana rehetra.
Ny mihetsika ny vatana iray dia vokatry ny hetsika.
Ny fihetsehan'ny fihetsehana rehetra dia avy amin'ny fihetsik'izy ireo, fihetsehana mandrakizay.
Ny andriamanitra dia aseho amin'ny alàlan'ny fihetsiketsehana, ary miaina sy mihetsiketsika ny olona ary voatazona hatrany ao amin'Andriamanitra, izay mihetsika - na ara-batana na ara-panahy. Hetsika izay mampientam-po amin'ny vatana ara-batana, mitazona ny zavatra rehetra mihetsika, ary manome aingam-panahy ny atiny tsirairay hanatanterahana ny asany amin'ny fanatanterahana ny drafitry ny fisehoana tsara.
Misy ny mihetsika izay manosika ireo atoma hifindra. Misy ny fihetsiketsehana mahatonga azy ireo hitambatra ho antoky ny molekiola. Misy mihetsika izay manomboka ny mikraoba aina ao, manimba ny endrika molekiola ary mampivelatra ary manangana azy ao anaty rafitry ny sela fambolena. Misy hetsika iray izay manangona ireo sela, manome azy lalana hafa ary manova azy ireo ho taova biby sy taova. Misy ny fihetsika izay mamakafaka, mamantatra ary manavaka ny raharaha manokana. Misy ny fihetsika izay mamolavola, mamolavola ary mampifanaraka ny raharaha. Misy ny fihetsiketsehana mampiray sy mamaha ny zava-drehetra ao amin'ny toetrany faran'izay lehibe indrindra.
Amin'ny alàlan'ny fihetseham-po fito momba ny tontolon'ny tontolo, ny tontolon'ny tontolo, ary ny maha-olombelona, ​​dia miverimberina matetika amin'ny ain'ny olombelona mandritra ny tsingerin'ny fahatongavan'izy ireo. Ireo fihetseham-po ireo dia mampiseho ny tenany: amin'ny fifohazana amin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra any amin'ny tontolon'ny lanitra-fanahin'ny ray aman-dreny; amin'ny fiovan'ny fanjakàna eo am-pifandraisana amin'ny onjan'ny fihetseham-pon'olombelona sy amin'ireo ray aman-dreny izay hanome ny vatany; amin'ny fifindrany amin'ny alàlan'ireo dingana ilaina amin'ny fananganana ny vatany; raha vao teraka ny vatana ara-batana ho amin'izao tontolo izao sy ny fahatongavana tao anatiny; amin'ny fanantenana, ny tahotra, ny fitiavana, ny fankahalana, ny faniriana, ny hetaheta, ary ny ady amin'ny raharaha mandritra ny tontolo ara-batana sy alohan'ny fahafatesan'ny vatana ara-batana; eo am-pialana ny vatan'ny vatana amin'ny fahafatesana sy ny fandalovana ao amin'ny tontolon'ny astral; ary amin'ny fiverenany ao anaty akanjon'ny fanahin'ny ray aman-dreny — raha tsy hoe manafaka amin'ny fihetsik'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny lalàny sy amin'ny fametrahana, amin'ny fotoana feno, fahatokisana feno sy fahatokisana amin'ny fahatsiarovan-tena mihoatra ny zava-drehetra.
Fihetsika fito ao amin'ny fototra fototra iray homogeneous no mahatonga ny fisehoana sy ny fanjavonan'ny oniversite sy ny tontolo ary ny lehilahy. Amin'ny alàlan'ny fihetsehana fito dia misy ny fiandohana sy fiafarana rehetra, avy amin'ireo esperité indrindra ara-panahy amin'ny fihodinan'ny tsingerina midina mankany amin'ny endrika ara-materialy indrindra, avy eo miverina amin'ny ambaratonga miakatra miakatra amin'ny tsingeriny mankamin'ny fisainana ara-panahy avo indrindra. Ireto fihetseham-po fito ireto dia: fihetsiketsehana manokana, hetsika manerantany, fihetsiketsehana, fihetsiketsehana, fihetsiketsehana, fihetsiketsehana sentripetal, fihetsiketsehana fanoherana. Rehefa mihetsika ao anaty ny alàlan'ny olona ny fihetsik'izy ireo, dia toy izany koa, eo amin'ny lafiny lehibe kokoa, izy ireo no miasa ao anatin'izao rehetra izao. Saingy tsy azontsika ny mahatakatra ny fampiharana azy ireo manerana izao tontolo izao mandra-pahitanay sy ankasitrahantsika ny zavatra nataon'izy ireo sy ny fifandraisany amin'ilay fahasarotana antsoina hoe olombelona.
Mihetsiketsika no fisian'ny fahatsiarovan-tena mandritra ny singa rehetra. Io no anton'ny fisehoan'ny abstract, mandrakizay, ambany. Ny tena manokana dia ny mihetsika izay mandrisika ny tenany ary manome ny dona ho an'ny antony hafa. Io no ivon'ny fihetsiky ny hafa rehetra, mitazona azy ireo, ary izy no maneho ny fahatsiarovan-tena amin'ny alàlan'ny raharaha sy ny akora. Raha ny momba ny olombelona dia ny ivon'ny fihetsiky ny fihetsiketsika dia eo an-tampon'ny loha. Ny faritaniny dia eo ambony sy eo amin'ny tapany ambony amin'ny vatana.
Motion Universal dia ilay fihetsiketsehana tonga amin'ny fisehoana tsy manam-pahaizana. Izy io no mihetsika izay mandika ny zavatra ho zavatra ara-panahy sy ara-panahy ho zavatra. Raha ny momba ny olona dia ivelany sy ivelany ivelan'ny vatana ny ivony, fa ny fihetsika mikasika ny tampon'ny loha.
Mihetsiketsika Mihetsiketsika no fihetsehana archetypal na idealy ifandraisan'ny zava-drehetra. Ity fihetsika ity dia manaitra ny famolavolana ary manome torolàlana momba ny raharaha amin'ny fikaonandohany, ary mandamina ihany koa ny raharaha amin'ny fizotry ny fanilikilihana azy. Ny afovoan-mihetsika synthetika dia tsy ao amin'ny vatana, fa ny hetsika dia mihetsika amin'ny ilany havanana amin'ny loha-tampon'ny loha sy amin'ny ankavanana.
Mihetsiketsika manaisotra ny zava-drehetra avy eo afovoany ka hatrany amin'ny diany. Manentana sy mandrisika ny fitaovana rehetra amin'ny fitomboana sy ny fanitarana. Ny afovoan-mihetsika afovoany dia ny felan'ny tanana havanana. Ny sehatry ny fihetsiny ao amin'ny vatan'ny olona dia amin'ny alàlan'ny sisiny ankavanan'ny lohan'ny loha sy ny vatan'ny vatana sy ny ampahany amin'ny ankavia, amin'ny zoro kely avy amin'ny lohany ka hatramin'ny afovoany eo anelanelan'ny valahany.
Mihetsika Static miaro amin'ny alàlan'ny fitazonana vonjimaika sy ny fifandanjana amin'ny fihetsiky ny centrifugal sy ny centripetal. Io hetsika io dia mametraka faobe na vatana mandrafitra singa. Raha ny tara-pahazavana miparitaka any amin'ny efitrano maizimaizina dia manome endrika ny habetsaky ny tsy hita maso, nefa ny fahitana kosa rehefa mandalo ny faran'ny tara-masoandro, mandanjalanja ny fihetsiketsehana mihetsiketsika ary mamela ho lasa hita maso ny fifandraisan'ny centrifugal sy ny centripetal fihetsiketsehana amin'ny endrika voafaritra ary mandamina ny atiny tsirairay arakaraka ny endrika nanaitra azy tamin'ny alàlan'ny fihetsiketsehana. Raha ny momba ny olombelona, ​​ny afovoan-mihetsika static no ivon'ny vatana ara-batana miorina ary ny faritry ny sahaniny dia mandalo sy manodidina ny vatana manontolo.
Mihetsika ny Centripetal manintona ny zava-drehetra amin'ny zorony mankany afovoany aorian'ny hetsika. Nahazo fifanarahana, feno lanja ary nandentika ny zava-drehetra tonga tao amin'ny faritra misy azy izy ireo, saingy nofehezin'ny tsikombakomba sy mandanjalanja amin'ny fihetsik'izy ireo. Ny afovoan-mihetsika centripetal dia ny felany havia. Ny sehatry ny zavatra nataony ao amin'ny vatana dia amin'ny alàlan'ny ilany havia amin'ny lohany sy ny vatan'ny vatana sy ny ampahany amin'ny ankavanana, amin'ny zorony kely avy eo an-tampon'ny loha ka hatrany afovoany eo anelanelan'ny valahany.
Mihetsiketsika mitsofoka, manadihady ary mamerina olana. Manome ny maha-izy azy izany ary ny maha-olona azy manokana. Ny afovoan-mihetsika an-tsokosoko dia tsy ao amin'ny vatana, fa ny hetsika dia mivezivezy amin'ny lafiny ankavia amin'ny loha ambony sy amin'ny lafiny havia.
Ny fihetsik-tena no mahatonga ny fihetsik'izao tontolo izao hanova ny zavatra tsy mahaliana ho zava-panahy, ary ny fanetsiketsehana ny tenany dia mahatonga fihetsehana synthetic hanome azy ary hitarika azy araka ny drafitr'izao tontolo izao, ary ny fihetsiky ny tenany ihany koa dia mahatonga fahatsiarovan-tena sy ireo fihetsika hafa rehetra ao. Ny anjarany dia manatanteraka ny anjara asany manokana sy manokana.
Ny fihetsik'izy ireo tsirairay dia atao amin'ny asany ihany, fa ny hetsika tsirairay dia hitazona ny fanahy ao amin'ny tontolony raha mbola misy ny Glamorany, ary hanangana rohy vaovao ao anaty rojo vy izay mamatotra ny fanahy amin'ny kodiaran'ny fahaterahana indray. Ny hany fihetsiketsehana izay manafaka ny fanahy amin'ny kodiaran'ny fahaterahana indray dia ny fihetsik-tena, ny andriamanitra. Ny fihetsik'Andriamanitra, ny tena, no lalan'ny fanafahana, ny lalan'ny fandavana ary ny apotheosis farany—fahatsiarovan-tena.